द्रौपदी: कुरुक्षेत्रकी एक प्यादा
Homeलेखद्रौपदी: कुरुक्षेत्रकी एक प्यादा
यायावर शुशिल Saturday, July 04, 2020
अहिलेसम्मको अध्ययन कालमा मैले तिमी जस्तो फरक पात्र भेटेकी छैन। तिमीलाई महाभारतमा पढेबाट मेरा निदरीहरू लुटिएका छन्। एकै चोटी दिमागमा एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू आउने गर्छन्। अनि मुख्य प्रश्न त तिम्रै कारणले कुरुक्षेत्र युद्ध भएको हो त ? यही प्रश्नले मेरो मानसपटलमा जरा गाडेको छ। तिमीलाई पढ्ने मेरो हुटहुटी कहिल्यै पनि नघटोस्।
तिमी एक यज्ञसेनी हौ । तिमी एक महाशक्ति हौ। अहिले पनि स्त्री जातिहरू आफ्नो शक्ति बारे अनविज्ञ छन् तर तिमीले त आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर छाड्यौ। तिमी पाण्डव हरुका लागि ऊर्जा थियौं। महाभारत मा माता गान्धारी ले तिमीलाई युग युगले स्मरण गरिरहने मर्यादा बनिरहनु भन्नु भएको थियो। हो, तिमीलाई युग युगले स्मरण गरिरहेको छ। कोही तिम्रो स्वयंवर सम्झन्छन् त कोही तिम्रो वस्त्रहरण। तिमी मृत्यु वरण गरेर पनि जीवित एक नारी पात्र हौ। पाञ्चाल की राजकुमारी द्रुपद की छोरी हौ तिमी।
संयोग भनौं वा लेखेको भनौं स्वयंवरमा अंगराज कर्णलाई लक्ष्यभेदन अस्वीकार गरी ब्राह्मण भेष रूपी अर्जुनलाई छान्न पुगेकी थियौं। तिमीले आफ्नो लोग्ने मा सुन्दर, गुणवान्, वलावान, धर्म वान, सावश्री, पाँच गुण को कामना गरेकी थियौं। समय पनि कस्तो, आखिर माता कुन्ती बाट भूलवश हुन गएको गल्ती सबैलाई बाँडेर लिनुबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि तिमीले अपेक्षा गरेका सारा पाँच गुण पाँच फरक पाण्डव- युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल, र सहदेव बाट प्राप्त गरेउ। तिमीले सजिलै पाँच पाण्डव की श्रीमती हुने निर्णय, मेरो भाग्य यस्तै हो भनेर स्वीकार गरेकी थियौ। तिमीले बहुपति एकैसाथ ग्रहण गरेउ। तिमी पाण्डव हरुको एकता थियौं।
पति पत्नी को सबै भन्दा महत्तवपूर्ण कुरा विश्वास र गोपनीयता लाई तिमीले सधैं कायम राखेकी थियौं। तिमीले एउटा कुरालाई कति कोण बाट नियाल्न सक्ने थियौं। अचम्म लाग्छ अनि तिम्रा मनका प्रश्न हरु त झन्। तिमीले पाण्डव हरुलाई बेला बेलामा अत्याचार भोग्नेले नियति सम्झी स्वीकार गर्ने हो भने अत्याचार रोकिने छैन, दिनानुदिन बढ्दै जान्छ भन्दै झस्काउने गरेको पाइन्छ। भीम र हिडब्बाको प्रेमबाट घटोत्कच पुत्र, अर्जुन बाह्र वर्षका लागि तीर्थ प्रस्थान गर्दा नागकन्या उलपी सँगको विवाह अनि पुत्रलाभ, अझै मणिपुर राजा की पुत्री चित्राङ्गदाका साथ विवाह, ब्रभुवाहन पुत्र, त्यति मात्र नभएर द्वारिका सुभद्रा आफ्नै वालसखा सङ्ग को विवाह कति सहजै लिएकी थियौं। तिमी भने अझै स्नेही हृदय लिएर अर्झुनको प्रतिक्षामा बसेकी थियौं।
पाँच पति बाट पाँच पुत्रहरू - प्रात विद्य , स्वतः सोम, श्रतकर्मा, शतानीक, शृतास्न लाइ जन्म दिएकी थियौं। सबैलाई समान न्याय गरेकी थियौ। समयको लिला भनौं की खै के भनौं पितामह को वचन काढ्न नसकेर युधि्ठिरले तिमी लगायत आफ्ना चार भाइ हरु, हात्ती, घोडा, धनसम्पति अनि दास दासी हार्नु भएको थियो। त्यसै बखत तिमीले नारी कुनै वस्तु हो र जुवामा थाप्नलाई भनेको क्रन्दन मेरै कानमा गुन्जिए जस्तो लाग्छ। यो सभ्यता र मानव जातिको उपहास हो। त्यो सम्पूर्ण नारी जातिको अपमान थियो। दु: शासन, कौरव ले तिमी प्रति गरेको व्यवहार सोच्न पनि सक्दैन मेरो सानो दिमागले।
जुवाघरमा आफ्नी पत्नी नांगिएको देख्न नपरोस् भनी आफ्ना आँखा बन्द गरेर वस्नु भएका पाँच पाण्डव हरु वाह! बढो आश्चर्य लागेर आउँछ भन्या । साँच्चिकै तिम्रो स्वाभिमानमा गहिरो चोट पुगेको थियो त्यो पुरुष सभाले। तिमीलाई जुवामा थाप्नु , दु: शासनले लतार्दै जुवा घरमा लिएर जानु, दुर्योधनले पञ्च पत्नी आएर मेरा काखमा बस भन्नु अनि कर्णले वेश्या भन्नु, अनि तिम्रो वस्त्र हरणको दुष्कर्म हुनु जस्ता सबै शृंखलाबृद्ध घटना हरु एक पछि अर्को गर्दै आउँछन् म कहाँ।
एक नारी आफ्नो जन्म गृह र जन्मदाता छाडेर परपरुष लाई आफ्नो सर्वस्व ठान्छे र पतिगृहलाई जीवन ठानेर जन्मदाता बाट टाढा रहन्छे। परन्तु त्यो नारीले पति गृहमा अपमान सहेर बाँच्न विवश हुन्छे। अनि पतिले आफ्नी पत्नीलाई निजी वस्तु सम्पति ठान्छन् यसको ज्वलन्त उदाहरण हो द्रौपदी बस्त्र हरण। पति गृहमा नारी अत्याचार को नमूना द्रौपदी हौ।
जबसम्म दु: शासनको छातीको रगतले आफ्नी केश छुने छैन तबसम्म खुल्ला राख्नेछु भनेर तिमीले गरेको प्रणले पनि समस्त नारी जाती माथि अन्याय गर्दा पुरुष जमातलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। तिमीले महाभारतमा युद्धका बखत देखाएको त्यो साहस अविस्मरणीय छ। अन्त्यमा समस्त जगतमा नारी धर्म , कर्तव्यको परिभाषा तिमी बाट स्थापित हुन्छ। तिम्रो जन्म सार्थक भएको छ। तिम्रो नाममा हामी गर्व गरेका छौं।
Article Nepali Articles द्रौपदी नेपाली लेख महाभारत लेख